Puntland oo bilaawday dadaalo lagu xalinaayo dagaal Beeleedyo dhacay – Banaadir Times
By banaadir 11th January 2021 95 No comment
Maamulka Puntland ayaa bilaabay dadaalo xal loogu raadinayo laba maleeshiyo Beeleed oo dagaalo khasaaro geystay uu ku dhex-maray dhul Miyi ah oo ku yaal degmada Isku-shuban ee gobolka Bari.
Colaada labada Beelood ayaa waxaa la sheegay inay salka ku heyso Ceel la doonayo in laga qodo degaanka Kurtumo oo 18 dhinaca Koonfur Bari kaxiga degmada Isku-shuban ee gobolka Bari.
Duqa degmada Isku ShubanMaxamuud Ismaaciil Ciise ayaa sheegay in amniga goobaha lagu dagaalamay ay la wareegeen Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta Maamulka Puntland, isla markaana xilligaan uusan jirin wax dagaal ah oo ka socda.
Guddoomiyaha oo la hadlay Idaacadda BBC-da waxaa uu sheegay in ka maamul ahaan, iyaga oo kaashanaya Odayaasha dhaqanka degmada inay bilaabeen dadaalo lagu xalinto Colaad beleedyada, isla markaana uu rajeynayo in guulo laga gaaro.
Dagaalka oo muddo laba Maalin oo isku-xiga ka dhacay degaanka Kurtumo ee gobolka Bari ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen 6 ruux in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo isugu jira dhinacyada dagaamay iyo Dad Shacab ah.
Dowladda Soomaaliya & QM oo ka wada hadlay Arrimaha doorashooyinka
Madaxweyne Farmaajo oo Maalinta Berri ku wajahan Dalka Jabuuti
Sawirro:- Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo daah furay olalaha ka hortaga Corono.
By banaadir 23rd March 2020